Fahatakarana ny Loko Fandikana Index amin'ny Led-Jiro LED Fototra-FETON CORPORATION Co.,Ltd
Ny fahazoana ny Index Rendering loko miaraka amin'ny LED
Fotoana: 2020-04-16 Hits: 178
Raha momba ny kalitao loharanom-pahalalana samihafa no takatra, ny index rendering loko (CRI) dia marika fandrefesana, ary ilaina ny manadino ny CRI rehefa misafidy sy mampiasa loharano maivana.
Inona no loko? Raha ny tena izy, tsy misy zavatra ny loko.
Na dia ny loko miloko marevaka aza dia hahavery ny loko raha ao anaty tontolo maizina tanteraka.
Noho izany, raha miankina amin'ny fahazavana ny zavatra iray loko, loko dia tsy maintsy ho fananan'ny hazavana. Ny fifangaroan'ny hazavana amin'ny wavel samy hafa matetika dia miteraka loko samihafa.
Ohatra, rehefa ny taratra optika miditra amin'ny rafitry ny atidoha-maso dia fehezin'ny teboka lava kokoa (ambonin'ny 620 nm), dia misy ny loko mena.
* Rehefa amin'ny wavelona antonony ny ankamaroan'ny taratra optika (manodidina ny 530 nm) dia hita fa maitso izy.
* Rehefa fehezin'ny takelaka fohy kokoa (tokony ho 450 nm eo ho eo) ny fika optika, dia hisy ny loko manga.
* Ny fifangaroan'ny haba lava sy antonony dia mety ho mavo, ary ny fifangaroan'ny wavelona fohy sy lava dia mety ho toa magenta.
Mifanohitra amin'ny fandinihana ny traikefa mijery zavatra hita taratra sy manaparitaka ny jiro tranga, izany dia manampy amin'ny fanavahana ny traikefa loko izay miseho rehefa mijery mivantana ny loharanom-pahazavana ny olona iray.
Fanondroana ny lokon'ny loko
Index Rendering loko, antsoina koa hoe CRI, dia refy ny fahaizan'ny fandokoana loko. Nomena isa amin'ny isa 1-100 izy io. Ny fihenan'ny mari-pahaizana CRI, ny loko tsy dia marina loatra dia haverina indray.
Ho an'ny tetikasa jiro amin'ny alàlan'ny jiro, ny tarika CRI ivelany dia RA70 mankany RA80, fa ny CRI anatiny dia RA85 mankany RA90.Fa kosa ho an'ny toerana manokana, toy ny efitrano fandraisam-bahiny, atrikasa fanontana, na toerana rehetra izay mila fandaniana loko miloko, ny index CRI dia mety hahatratra RA95 amin'ny RA98 na ambony kokoa.
Indraindray lainga ny jiro. Ny lokon'ny zavatra any ivelany dia tsy mitovy amin'ny trano anatiny. Izany dia satria ny jiro samy hafa fahaizana amin'ny fandihizana loko.
Amin'ny hazavana LED, CRI dia mifandray amin'ny phosphor izay amboarin'ny LED. Mba hahazoana haavo avo lenta CRI dia mila kalitao avo kokoa sy avo kokoa ny vidiny, ka vitsy ny mpanamboatra mampiasa sanda mihoatra ny 90 mba hitazonana ny vidiny sy fifaninanana.
Iraha mijery LED mora ianao dia hahita fahasamihafana lehibe. Misy faritra maro ao amin'ny tontolon'ny loko izay tsy manome fahazavana tsara. Ity dia tena mety hiteraka tora-po hafahafa amin'ny tonon-koditra na paty loko hafa amin'ny sary, izay tsy ampoizina, tsy voahetsika ary tsy voafehy.
Ny CRI ambony indrindra izay azo tanterahana amin'ny jiro LED dia CRI 98, izay ampiharina ao amin'ny tranom-bakoka, galeri-kanto, fivarotana akanjo, makiazy Supermarkets, sy fampiharana hafa mila kalitao avo lenta.
Iza no manana ny loko loko tsara indrindra indrindra? masoandro, izay voafaritra ho CRI100.
Ny hazavan'ny andro voajanahary dia ahitana ny loko rehetra hita ao amin'ny spraida hita maso, miampy ny haavon'ny herin'ny hery na angovo isaky ny loko milentika dia saika mitovy amin'ny lafiny rehetra.
Amin'ny ankapobeny, misy loharano maivana manana mari-pahaizana CRI eo amin'ny 90 na avo kokoa dia haneho am-pahatokiana ny loko. Ny loharanom-pahalalana tungsten avo indrindra dia hanana ny mari-pahaizana CRI eo amin'ny 90 na avo kokoa (maherin'ny 95). Sunshine no ho tsara indrindra amin'ny ambaratonga CRI rehetra.
Ho fanampin'ny andro, ny fomba hahatratrarana ny fampisehoana loko tsara indrindra? Ny valiny dia ny hoe manana loharano maivana manana spekty feno sy jiro mitohy.
Mba hahatratrarana ny tanjona dia namboarinay LED ny loharanon-jiro hafa amin'ny hazavana maivana hafa izay hita na tsy hita.
Taloha: Ny fahazoana ny Index Rendering loko miaraka amin'ny LED
Next: Fitaovana fanilo ankapobeny